Waxsansheeg News - Habka Warshadaynta Dhalada Dhalada
Weyn Noocyada galaaska:
Nooca I - Muraayadda Borosilicate
Nooca II - Muraayadaha Soodhada Liinta ee Lagu Daaweeyey
Nooca III - Muraayadaha Soda Lime
Waxyaabaha loo isticmaalay in lagu sameeyo muraayadda waxaa ka mid ah ku dhawaad ​​70% ciid oo ay weheliso iskudar khafiifa oo ah soodhada soodhada ah, nuuradda iyo walxaha kale ee dabiiciga ah - waxayna kuxirantahay waxyaabaha guryaha laga doonayo.
Marka la soo saarayo dhalada liinta soodhada, jajabiyey, galaaska dib loo rogay, ama galley, waa qayb muhiim ah oo muhiim ah. Xaddiga kareega ah ee loo isticmaalo dufcadda dhalada way kala duwan tahay. Cullet waxay ku dhalaalaysaa heerkul hoose oo yareynaysa isticmaalka tamarta una baahan wax ka yar ceyriin.
Muraayadda borosilicate waa inaan dib loo warshadeyn maxaa yeelay waa galaas u kuleylka u adkeysaneysa. Sababtoo ah guryaha kuleylka u adkaysta, galaaska borosilicate ma dhalaali doonaan isla heerkulka sida muraayadda Soda Lime waxayna wax ka bedeli doonaan aragtida dheecaanka ee foornada inta lagu jiro marxaladda dib-u dhalaalida.
Dhammaan ashyaa'da ceyriinka ee samaynta dhalada, oo ay kujiraan caleenta, waxaa lagu keydiyaa guri dabaq ah. Kadibna waxay kujiraan culeys miiska culeyska iyo isku qasida ugu dambeyntiina waxaa loosoosaaray geedo duug ah oo bixiya foornooyinka galaaska.
Qaababka loo Soo Bandhigo Weelasha Weelasha:
Muraayadaha indhaha qarxa waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dhalada caarada. Abuurista muraayad la afuufay, gobs-ka dhalada kuleylka kulul ee foornada waxaa loo jiheeyaa mashiinka wax lagu hagaajiyo iyo godadka halkaas oo hawadu lagu qasbay inay soo saarto qoorta iyo qaabka weelka guud. Mar alla markii ay qaabeeyaan, waxaa markaa loo yaqaan Parison. Waxaa jira laba hanaan oo sameynta oo kala duwan oo lagu abuurayo weelka ugu dambeeya:
Geedi socodka Qulqulka & Feejignaanta - waxaa loo isticmaalaa weelasha cidhiidhiga ah halka isbarbardhiga ay ka sameysan tahay hawo isku buuqsan
Habka Saxaafadda & Qulqulka- Waxaa loo isticmaalaa weelasha dhammeeyaha balaastikada oo weyn oo isbarbardhigga lagu qaabeeyey iyadoo lagu riixayo galaaska ka dhanka ah caaryada madhan ee kuxiran birta.
Muraayada Tuubada waxaa lagu sameeyay geedi socod joogto ah oo la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo labada weel ee Danner ama Vello si loo gaaro dhexroor sax ah iyo dhumucdiisaba. Muraayada waxaa lagu sawiray xariiq taageero ah oo mashiin mashiin lagu sawiray.
Habka Danner - quraaradu waxay ka soo qulqulaan foornada foornada qaab jeexan
Habka Vello - quraaradu waxay ka soo qulqulaysaa wejiga hore ee foornada weel isla markaa qaabeeya
Geedi socodka Qaababka Glass Dambaysta
Socodka Qulqulka iyo Qulqulka - hawo isku buuran ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo gob isbarbar dhig, kaas oo dejiya qoorta dhammays tiran isla markaana gob ka siisa qaab isku mid ah. Isbarbardhigga ayaa markaa loo jiidayaa dhinaca kale ee mashiinka, iyo hawo ayaa loo isticmaalaa in lagu afuufo qaabkeeda la doonayo.
Habka Saxaafadda iyo Qulqulka- tuubo ayaa la galinayaa marka hore, hawo kadib ayaa la raacayaa si gobku u noqdo mid isbarbar dhiga.
Hal mar howshan waxaa caadi ahaan loo isticmaali jiray weelasha afka, laakiin marka lagu daro Habka Caawinta Vacuum-ka, waxaa hada loo isticmaali karaa codsiyada cakiran ee afka.
Awoodda iyo qaybinta ayaa ugu wanaagsan qaabkan galaas sameynta waxayna u saamaxday soosaarayaasha inay "fudud" waxyaabaha caadiga ah sida dhalada biirka si ay u ilaashadaan tamarta.
Xaaladda - dhib malahan habka, mar alla markii weelka dhalada galaaska la diyaariyo, weelasha waxaa lagu ridayaa Annealing Lehr, oo heerkulkooda dib loogu soo celiyo illaa 1500 ° F, ka dibna si tartiib tartiib ah looga dhigo illaa 900 ° F.
Kuleylka kuleylka iyo qaboojiyahaani wuxuu baabi'inayaa walaaca haamaha. Tallaabadan la'aan, dhalada ayaa si fudud u burburin doonta.
Daaweynta dusha sare - Daaweynta dibedda ayaa la dabaqaa si looga hortago duubista, taas oo ka dhigaysa muraayadda mid u nugul burburka. Dahaarka (sida caadiga ah polyetylenka ama isku dhafka macdanta oksaydhka) waxaa lagu buufiyaa oo laga falceliyaa dusha sare ee galaaska si ay u sameyso dahashka budada ah. Dahaadhistaani waxay ka hortagtaa dhalooyinka inay isku dhegaan midba midka kale si loo yareeyo jabka.
Dahaadhka 'Tin oxide' waxaa loo adeegsadaa daaweyn kulul. Daaweynta dhamaadka qabow, heerkulka weelasha weey hoos u dhacday illaa inta u dhexeysa 225 iyo 275 ° F kahor dalabka. Dahaarkaan waa la dhaqi karaa. Daaweynta kulul ee loo yaqaan 'End End treatment' waxaa la istcimaalaa howsha isuduwaha. Daaweynta loo adeegsado habkan ayaa dhab ahaan ka falcelisa galaaska, oo lama maydhi karo.
Daaweynta Gudaha - Daaweynta Qulqulka Gudaha (IFT) waa geedi socod ka dhigaya Nooca III galaas galaaska Nooca II waxaana lagu dabaqayaa galaaska si looga hortago ubaxyada.
Kormeerka Tayada leh - Kormeerka Tayada Kulul ee Kulul waxaa ka mid ah cabirka culeyska dhalada iyo hubinta cabirka dhalada leh cabirrada go'doon la'aanta ah. Ka dib markaad ka baxdo dhamaadka qabow ee lehr, dhalooyinka waxay ka gudbaan makiinadaha baaritaanka elektiroonigga ah oo si otomaatig ah u ogaanaya ciladaha. Kuwaas waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn: kormeerka dhumucda darbiga, ogaanshaha burburka, falanqaynta cabbirka, baarista dusha sare ee shayga, iskaanka darbiga iyo iskaanka salka.
Si aad wax badan uga ogaato cilladaha Lab Glass & Sida loo baadho Baakadaha Glass, fadlan halkaan riix si aad wax badan u aqriso oo aad u soo dejiso hagaha tixraaca si ay kaaga caawiso go'aaminta haddii aad u baahan tahay inaad ka walaacdo cillad.
Tusaalooyinka Qumbaha Qashin-qubka & Naarta
Dhalooyinka Boston Wareega
Tusmooyinka Saambalka saliida
Tusaalooyinka Saxaafadda iyo Qumbaha Weelasha
Dhalooyinka Weelka ee Weelka ballaaran
Dhalo Faraha Faransiiska
Dhaladaha Wareega Dhexe ee Qalin-jabinta
Geedi socodka Foomka Glass-ka Tubular
Cabbirada tuubbada laga bilaabo 1.6mm illaa 66.5mm dhexroor
Saamiyada qiimahoodu yahay ilaa 400m daqiiqaddii xajmiga yaryar
Muraayaddu waxay ka soo baxdaa foornada hore ee foornada qaab ribbon ah, oo ku dhacda dhamaadka sare ee jaakad jilicsan oo gubanaysa, oo ku sii jeedda qulqulka godka qulqulaya.
Garabka ayaa ku duuban gacmihiisa si uu u yeesho lakab jilicsan oo galaas ah, kaas oo ku dhacaya darafka gacmaha iyo korkiisa darafka.
Mashiinka tuubbooyinka ayaa markaa lagu sawirayaa xariijin taakuleyn ah oo mashiin mashiin qaada oo ku yaal meel ilaa 120 mitir u jirta.
Cabbirrada tuubbooyinka tuubbada waxaa lagu go'aamiyaa sida muraayadda ay u qaboojiso iyada oo barta laga dejinayo ay tahay qaybta aan la taageerin ee udhaxeysa buunshaha iyo isgoyska koowaad.
Muraayaddu waxay ka soo qulqulaysaa foornada weelka hore weelka oo lagu ridayaa makiinad toosan oo toosan ama gambaleelka oo ku wareegsan yahay giraan orifice ah.
Muraduhu waxay ku qulqulayaan booska sannadlaha ah ee u dhexeeya gambaleelka iyo giraan ka dibna waxay ku safraan xariijin rollers illaa mashiinka sawirka illaa 120m ka fog.
Tube Draw Tayada Xakamaynta
Markii tuubooyinka la dhammeeyo waxay mari doonaan baaritaano badan iyo kormeerno si loo hubiyo inay u hoggaansan yihiin heerarka tayada. Baadhitaan muuqaal ah waxaa sameeya nidaam sare oo kamarado sare ah oo loogu talagalay ka saarida cilada. Marka la sameeyo oo loo jaro qaabka saxda ah, cabbirrada waa la ansaxiyay.
Tusaalooyinka muraayadaha tubada